China Strawberry emepụta na suppliers | Ihe nketa
Strawberry ọhụrụ ahụ sitere na Linyi City nwere ogo dị elu na ekpomeekpo Pụrụ Iche.
Osisi Strawberry ohuru sitere na Linyi City nwere oke mma na Unique flavor.Strawberry na-esi isi bara ọgaranya, anụ ụtọ na utoojoo, Heritage Fikiere strawberry banyere 15% mmiri, ojiji nke elu-edu strawberries, site na oyi na-atụnye na ala-okpomọkụ sirop, amụma mkpuchi na acidity na isi na-esi isi, na ekpomeekpo pụrụ iche.
Ezigbo mma, ezigbo teknụzụ, na-anwale ule ahịa na ngwa ahịa. Dainty na-echekwa onye nnọchi anya oge ochie-mkpụrụ osisi strawberry ọhụrụ dị ụtọ, anụ ahụ zuru oke ma sie ike, utoojoo ma dị ụtọ, ma detụ ụtọ ibiaghachi Q, mkpụrụ a na-ahụ anya nke ọma, mmeghari mmiri zuru oke ma ọ dịghị adalata, abụba efu, ngwaahịa ndị anaghị agbanwe agbanwe.
Anyị enwetala ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ na-atọ ụtọ. Anyị nwere ike ịweta gị ọfụma na ụdị ngwa ahịa ọ bụla jikọrọ ọnụahịa ngwa ahịa anyị maka ọnụahịa ezi uche dị na ya Ngwaahịa Ọhụrụ Ngwaahịa Nri Nri Ifri Strawberry, Onye Na-eweta China, Mbupụ, Nchekwa site na ihe ọhụrụ bụ nkwa anyị na ibe anyị.
Ezi uche price China Ifriizi Strawberry Mpekere, Strawberry iberi, Na narị afọ ọhụrụ, anyị na-akwalite anyị enterprise mmụọ "United, uchu, elu arụmọrụ, ọhụrụ", na-arapara n'ahụ anyị amụma "dabere na àgwà, na-enterprising, na-egbu maka klas mbụ ika" . Anyị ga-eji ohere ọla-edo a mepụta ọdịnihu dị mma.
Anyị na-adabere na ike ọrụ ike ma na-emepụta teknụzụ dị iche iche iji mezuo ọchịchọ nke China New Product Chinese Natural Freeze Dried Strawberry Flakes, Anyị ji obi ụtọ na-anabata atụmanya, ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị di na nwunye si n'akụkụ ụwa niile ịkpọtụrụ anyị ma chọọ maka imekọ ihe ọnụ akụkụ dị mma.
China New Product China Ifriizi Mịrị Strawberry, Mịrị Strawberry, Mgbe ị na-nkọ na nke ọ bụla n'ime anyị ihe na-esonụ na ị na-ele anyị ngwaahịa ndepụta, biko na-eche ka ịkpọtụrụ anyị maka ase. Ga-enwe ike iziga anyị ozi ịntanetị ma kpọtụrụ anyị maka ịgba izu ma anyị ga-aza gị ozugbo anyị nwere ike. Ọ bụrụ na ọ dị mma, ị nwere ike ịchọpụta adreesị anyị na weebụsaịtị anyị wee bịa na ụlọ ọrụ anyị. ma ọ bụ ozi ndị ọzọ nke ihe anyị n'onwe gị. Anyị na-n'ozuzu njikere ewu ogologo na otu ebe-arụkọ ọrụ na mmekọrịta ọ bụla o kwere omume shoppers n'ime metụtara ubi.
Nke gara aga: Aprịkọt
Mpekere Strawberry Chips
Mịrị Strawberry Mpekere
Ifriizi Mịrị Strawberry Mpekere